अद्वितीय शास्त्रीय कालो व्यावसायिक मेकअप ब्रश सेट China Manufacturer
विवरण:उच्च गुणस्तर एल्युमीनियम भाँडा प्रसाधन सामग्री ब्रश,काठ कास्मेटिक ब्रश सेट,आराम से सिंथेटिक हेयर मेकअप ब्रश
Home > उत्पादनहरू > ब्रश सेट > 5pcs ब्रश सेट > अद्वितीय शास्त्रीय कालो व्यावसायिक मेकअप ब्रश सेट
मोडेल संख्या: YC063
सामग्रीहरूको विस्तृत परिचय
1. कपाल: भूरी तल र कालो टिप्स संग सफ्ट सिंथेटिक कपाल, जुन शास्त्रीय उपस्थिति प्रस्तुत गर्दछ। विभिन्न मेकअप ब्रश विभिन्न मेकअप आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। बहु-कार्यात्मक कस्मेटिक ब्रश अनुहार, गाई र आँखाको लागि उपयुक्त छ।
2. धूर्त: गन रंग एल्यूमिनियम फ्युल, फैशनेबल उपस्थिति पनि अधिक आँखा-कोचिंग देखिन्छ।
3. हैंडल: काठ को ह्यान्डल अखरोट बनावट, सजिलो छाला स्पर्शको अनुकरण गर्दछ।
Yacai को संक्षिप्त परिचय
हाम्रो श्रृंगार ब्रश उच्च गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्य संग छ, हाम्रो श्रृंगार ब्रश विभिन्न उत्कृष्ट डिजाइनहरु, क्लासिकल उपस्थिति को रूप मा, हाम्रो उत्कृष्ट कारीगरी र पेशात्मक टीम संग एक साथ, श्रृंगार ब्रश पूरी दुनिया को लागि पूरी तरिका र राम्रो प्रतिष्ठा संग, यदि तपाईं हो एक मेकअप ब्रश खोज्दै, योआका तपाइँको उत्तम छनौट हो र हामी प्रचुर मात्रामा विश्वास छ जुन तपाईं हाम्रो मेकअप ब्रशसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ।
सुन्दरताको पछि लाग्न सक्छ।
प्याकेज हाम्रो ग्राहकको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ।
सामान्य प्याकेजिङ्ग प्रत्येक ब्रश एक ओपीपी थलोसँग छ, त्यसपछि धेरै सेटहरू कार्टन बक्समा।
1. हामी ODM र OEM सेवा को आपूर्ति गर्छन।
2. हामी सिंथेटिक फाइबर र आफूलाई विभिन्न प्रकारका जनावरको बाल, काठ र प्लास्टिक ह्यान्डल बनाउँछौं, त्यसैले हामीसँग राम्रो मूल्य छ र हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सक्दछौं।
चरण 2: बिस्तारै अतिरिक्त पानी हटाउन ब्रिस्टले थिच्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि सबै ब्रिस्टलहरू दृढतापूर्वक संकुचित हुन्छन्।
चरण 3:4देखि6घण्टा पर्खनुहोस् र तपाईंको ब्रश भरि र प्रयोग गर्न तयार हुनेछ! जब यो पुरा तरिकाले सुकेको हुन्छ, ब्रिसल्सहरू मूल फारममा पुन: आकार गरिनेछ।
पर्ल नारंगी कस्टम मेकअप मेकअप ब्रश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
5 पीसीसी मिनी पोर्टेबल यात्रा मेकअप ब्रश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
टट्टू हेयर व्यावसायिक मेकअप आँखा छाया ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
5pcs ब्यूटी सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्ट आर्ट ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
उच्च गुणस्तर एल्युमीनियम भाँडा प्रसाधन सामग्री ब्रश काठ कास्मेटिक ब्रश सेट आराम से सिंथेटिक हेयर मेकअप ब्रश एल्युमिनियम फ्रेल प्रसाधन सामग्री ब्रश श्रृंगार ब्रशका लागि प्रसाधन सामग्री ब्रश उच्च गुणस्तर एकल प्रसाधन सामग्री फाउंडेशन ब्रश एल्यूमिनियम फ्रेल प्रसाधन सामग्री ब्रश सेट उच्च गुणस्तर प्रसाधन मेकअप ब्रश